Makumi gumi akanaka anopera kune yakavhurwa sosi. Pfungwa Huru | Linux Vakapindwa muropa
Git-based vhezheni yekudzora masevhisi anobatsira kwazvo kuvandudza software.
Kunyange zviri pamutemo Makumi emakore anopera muna Zvita 31, 2020, ndinofunga tinogona kumberi kwedu pachedu. Pasina kupokana, makore gumi echipiri ezana ramakumi maviri nemasere rave lyakanakisa zvachose yemahara uye yakavhurwa sosi software.
Ehezve, hazvisi zvese zvakakwana. Makambani mazhinji akabatanidza sosi yakavhurika zvakavanzika masevhisi asi kwete kuremekedza zvakanyanya kuvanzika. Kururamisa kwezvematongerwo enyika yakanamatira muswe ichitsiva meritocracy uye hurumende zhinji vachiri kusarudza matekinoroji akavharwa. Asi, kunyangwe hazvo chiyero chiri chakanaka.
1 Nei ndichiti makore gumi akanaka ari kupera?
1.4 Webhu zviyero
2 Makumi gumi akanaka anopera. Zvaigona kunge zviri nani
Nei ndichiti makore gumi akanaka ari kupera?
Mumakore gumi aya, gore rakamirirwa kwenguva refu yeLinux pane desktop haina kusvika. Zvakare, kuyedza kutsvaga nzvimbo mumusika wefoni mbozha kwakakundikana. Nekudaro, izvo zvakabudirira kugadzirisa mune dzimwe nzvimbo.
Kunyangwe iyo pfungwa yeCloud Computing yakauya kubva pakutanga kwezana ramakore, yaive mune iri gumi makore apo kubatanidzwa kwakaitika.
Kushandisa pamapuratifomu egore kunotarisirwa ku inosvika makumi matanhatu muzana ezvese IT zvivakwa, uye pakati pe60% ne70% yeese software software uye tekinoroji mari muna 2020. Ongororo yeForbes inofungidzira kuti 83% yemabasa emabhizinesi anozove ari mugore ne2020.
Mazhinji makore mhinduro shandisa imwe kana akawanda akavhurika sosi matekinoroji sezvo ivo vachibvumidza kugadzirisa zviri nyore matambudziko ekuenderana pakati peanenge aripo uye matsva mashandisirwo uye vadzivirirwe kusungirirwa kune iye anopa IT mhinduro.
Zvichida ndicho chakakosha kugadzirwa kweLinus Torvalds (kusiyana ne linux kernel inogona kushandiswa chero sisitimu inoshanda) Git uye ese anotorwa masevhisi senge GitHub kana GitLab yakakurumidza kuvandudza software kufambisa kubatana pakati pevagadziri uye kunyange vashandisi.
Kana chimwe chinhu chakaratidza makore gumi isu tiri kurarama, ndiyo nguva dzese rusununguko rukuru kubva kune Hardware yatinayo kumba. Kana iro gore richitibvumidza kushandisa komputa masevhisi ari kure, midziyo inotibvumidza kumhanya zvirongwa munharaunda (zvakare kure zvirokwazvo) kusava nehanya nenharaunda.
Vhura masosi mapurojekiti akadai seDocker, Kubernetes, uye LXD ndiwo anonyanya kushandiswa mukutakura midziyo.
Muna 2009 Microsoft Internet Explorer yakatonga musika webrowser uye Adobe ine Flash kuburitswa kwemultimedia zvemukati zviri online.
Zvisinei, ipapo nhare mbozha haina kukwanisa kubata Flash zvemukati, uye kushanda kweMicrosoft, Silverlight haina kumbobudirira.
Zvakare, pakanga paine de facto standardization kana uchifambisa akawanda mabhurawuza kuenda shandisa Chromium browser sosi kodhi se base. Ngatirangarirei kuti Chromium ndiyo yakavhurika sosi sosi iyo Google Chrome inoshandisa.
Kutaura kuti kune mimwe mitauro yekuronga kupfuura kune ma programmendi ingangoita kuwedzeredza. Pamwe hazvisi izvo zvakakura kufunga Donald Trump ane zvake. Chokwadi ndechekuti kune akawanda.
Pamitauro iriko yakanyanya kusarudzika ndeyekuti Java yakawedzera kuvhurika, kuve unenge wakavhurika kwazvo sosi. Saizvozvowo Microsoft ne yako .Net chikuva
Mabhizinesi nehurumende vari kuratidza kuwedzera kufarira mu data hombe, huchenjeri hwekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina. Iyo mitauro yekuronga iyo inotonga kugadzirwa kweanowirirana kunyorera vari Python naR. Ehezve yakavhurika sosi.
Zvakare zvishandiso zvakasarudzika zvemapurojekiti aya. Iyi ndiyo kesi yeTensor Kuyerera kana Scikit-dzidzira huchenjeri hwekugadzira kana Apache Hadoop yekubata dhata hombe.
Makumi gumi akanaka anopera. Zvaigona kunge zviri nani
Sezvo Steve Ballmer akatsanangura Linux se "kenza", mvura zhinji yakapfuura pasi pebhiriji. Muchokwadi, aive Ballmer iye amene akatanga maitiro eMicrosoft ekusvika yakavhurika sosi.
Zvakadaro Pane zvakawanda zvekuita Kunyangwe sosi yakavhurika ichishandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya munzvimbo yemakambani, zvakafanana hazvisati zvaitika munzvimbo yepamba. Muchokwadi, mune ino chikamu, lkune kumisikidzwa kweimwe nzira yekudyara uye vavengi vekuvanzika inoita kunge iri kuramba ichiwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Makumi gumi akanaka anopera kune yakavhurwa sosi. Izvi ndizvo zvimwe zvakakosha
NDATENDA nekuunganidza uku.
Ndichakuwedzera kubva kukohwa kwangu ...
Handizive kuti nei izwi rekuti gomarara richishandiswa zvinoshoresa mune ino mamiriro.
Kubva pakuona kwevadziviriri vemahara uye yakavhurika sosi software, inofungidzira ingangoita imwe kufa kweiyo proprietary software nekumhanya kukuru kwekuparadzira uye kuwedzera kwemahara.
Nzvimbo yePLICA (Yemahara uye Yakavhurika Sosi Chirongwa - FOSS muChirungu) yakakura zvekuti dura rese rekufamba rinofuratirwa muchinyorwa chino.
1.- Android yakavakirwa paAOSP uye mune akawanda mamodheru emahara vhezheni senge iwo akavakirwa paDzinza anogona kuiswa.
2.- Chrome OS ine Linux kernel uye Android uye GNU kuenderana ndiyo yakanakisa OS yekutengesa mumahybrids
3.- IOS inoenderana neFreeBSD kernel, kunyange zvisingaite kuita mamwe mahara maitirwo sezvo mafoni eIOS akavharwa.
Iyo Huawei (ine chikamu chikuru chemusika uye ichikura) iri kubatana naLignux Deepin (debian), uye kwete chete kune desktop desktop.
Iyo Chrome OS ine Linux kernel yakakura zvakanyanya.
Kuti iyo yekuisa / yekubuda masisitimu (BIOS / EFI) yaimbove 100% yekutenda nekutenda kuCOREBOOT uye zvishandiso zvine Chrome OS havasisiri 100% uye unogona kusarudza pakati pemamodeli mazhinji.
Kuwedzera pakuitwa virtualized, ese ari maviri MS WOS uye Chrome OS inobvumidza kushandiswa kweyakagadzika GNU / Linux subsystem, izvo zvavanoita kudzivirira mbiri bhutsu, vasina kuzviwana zvachose (kukunda chikamu kushoma kwakarumbidzwa uye kuzivikanwa).
Iyo yemahara Hardware senge RISC-V MIPs processor mirairo uye neiyo POWER ecosystem - isu tinoshaya yakanaka yemahara GPU - iri kutanga kubudirira.
Iyo GNU / Linux inogona pamwe neazvino proprietary unix (IBM's AIX)
kunyangwe zvaive kuburikidza nekutengwa kweRed Hat neBMM
Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki chekuti isu tine angangoita maviri mapurojekiti epanyama mafoni Pinephone neLibrem, neGNU seiyo huru OS, uye inoenderana nedzimwe Linux kernel OSs. Izvo zvingangodaro zvichawedzera kuenderana kwemamwe ma terminals nekuparadzirwa kweGNU kwemafoni.
Ndinovimba chikamu chechipiri chine izvi zviratidzo zvehutano, uye zvimwe, zvechipiri, asi zvisina kukosha, kuti unyore zviri nani.
Ndinoonga zvipo zvako uye zvinonyatsoratidzwa. Handifungi kuti ndinogona kuita zvirinani. Asi ini ndinovimbisa kuedza.
Nezve iyo inokodzera "kenza." Kare-kare bhuku rakaburitswa rakanzi "Tarenda Yakawedzeredzwa." Munhu wekutanga wavanotaura nezvavo ndi Steve Ballmer.